Faizal Cali Waraabe Doorasho Uuma Jeedo Ee UCID Wuu Ku Danaystaa By Abdi Mustafe | Haqabtire News
Xisbigii Ucid wuxuu Faizal ka dhigay mid uu ka soo saaro masaariiftiisa, tigidhadiisa iyo guulwadeynta Kulmiye oo uu aqal kaga dhistay masalaha. inkasta oo taageera yaashii Ucid ay badan-koodi ka huleeleen oo dadka ku haday aad u yaryiin oo uu intoodaba adeer u wada yahay ayaa waxa bulshadu is weydiinaysaa intaasina waxay ka dul qabanayaan.
Faizal isagu ma qarsan oo xisbigii faraha ayuu kala baxay oo waakaa kola weftiga Dubai dhex boodaya marna Jabouti sii dabay-shanaya een xisbigii Ucid sooba hadal qaadayn hadana dhaqaale ku samaysanaya. Marka xisbiyada dhowr sano ka dib la furo cidi fili mayso in ucid dib u soo baxo Faizal na intaa wuu garanayaa oo wuxuu is leeyey hadaba intaan Liisanku kaa dhicin la boob oo lacag ku samayso.
Qasdiga Faizal marka horeba xisbiga u samaystay waxay ahayd in uu ku shaqaysto wayna muuqataa oo ucid xafiisyo badan kuma laha gobolada iyo deg mooyinka toona doorashana maba geli karaan. Shaqadii Faizal xisbiga u samaystay ayuu iminka helay oo saldhiga iyo khaatumaba wuu dilaalay oo xisbina dan kama laha soo bixitiisa.
Faizal waxa xiiso badani u hayaa in uu Xamar tago oo uu had iyo jeer hadal hayo isaga oo le hebelow adiga lugu dooni maayo ee anigaa la i doonayaa. Faizal Xamar aad buu u jecelyey ee horta wuxuu la dhamaynayaa inta xisbiga ucid dhimanayo ee liisanku ka dhacayo.